Shirkii Somali Economic Forum ee Maalgashiga Soomaaliya 2013ka oo lagu soo Gabagabeeyay Nairobi [SAWIRRO] | Salaan Media
Shirkii Somali Economic Forum ee Maalgashiga Soomaaliya 2013ka oo lagu soo Gabagabeeyay Nairobi [SAWIRRO]
Magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa maalmihii 15-12 July 2013 waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya,waxaana ka soo qaybgalay shirkado ajnabi iyo Soomaali isugu jira.
Shirka waxaa soo qaban qaabiyay Somali Economic Forum waxaana maalgashadaayasha ajnabiga iyo Soomaalida isugu jiray lagu tusaaleeyay fursadaha ka banaan Soomaaliya xilligan oo ay nabadgelyo ka jirto.
Xasan Muuse Dudde oo ah agaasimaha Somali Economic Forum ayaa sheegay in ay doonayaan Soomaaliya laga caawiyo dhinacyada ay dadkeedu u baahanyihiin sida beeraha,kaluumaysiga iyo xoolaha nool oo Soomaaliya ay hodan ku tahay,wuxuuna u mahadceliyay ganacsatada gudaha oo uu sheegay in ay dalka ka sameeyeen maalgashi aad u wanaagsan.
Shirkan oo socday labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa laga soo saaray talo bixin ku wajahan maalgashadayaasha Soomaalida iyo ajnabiga ah iyo sidoo kale talooyin loo soo jeediyay dowlada Soomaaliya oo ku saabsan sida ay u soo dhoweyn lahayd maalgashadayaasha ajnabiga ah.
Dhawaan ayeey ahayd markii golaha Baarlamaanka Soomaaliya ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen sharciga maalgashiga dalka, kaas oo in mudo ah la sugayey, waxaa arinkaas aad u soo dhaweeyey shirkadaha ajanabiga ah ee danaynaya inay Soomaaliya maalgashtaan.
Soomaaliya hada waxaa ka jira dowlad rasmi ah oo gali karta heshiisyo caalami ah, waxaa sidoo kale dib u soo noqday nabad galyadii caasimada oo laf dhabar u ah isku xirka ganacsiga dalka iyo maalgashiga, hada waxaa ka howl gala magaalada Muqdisho shirkado badan oo ajanabi ah kuwaas oo soo kordhiyey adeegyo kala duwan iyo fursado shaqo.
Agaasimaha Somali Economic Forum
Hassan Muse Dudde